I-Tagaytay 55"TV, i-Netflix, i-Nespresso&FREE parking&UV - I-Airbnb
I-Tagaytay 55"TV, i-Netflix, i-Nespresso&FREE parking&UV
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Marishiel
U-Marishiel Ungumbungazi ovelele
Ukukhanya kwansuku zonke kwe-UV nesibulala-magciwane. Indlu yase-Ayala engagcwele futhi enomsindo. I-Wifi ku-100mbps. Ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukusuka ku-2malls & izindawo zokudlela. Izindawo ezingu-2 zokuphuma ukuze ungabi namathrafikhi. Kusuka endlini lapho uphuma, njalo khetha ukujikisa ngakwesokunxele uye ngemuva kwenxanxathela yezitolo ze-Fiora ukuze ufinyelele emgwaqeni omkhulu we-aguinaldo & Rotonda
Izidlo zokwamukela zamahhala &nespresso capsule. Ukusetshenziswa kwamahhala kwemidlalo yebhodi. Ukupheka kuvunyelwe. Amanzi okuphuza angenamkhawulo & UKUPAKA KWAMAHHALA egumbini elingaphansi. SICELA UNGABI NOHAMBO LOSUKU.
Ayikho i-balcony futhi Ayikho uhambo losuku ngaphandle uma ungena ngo-2pm namanje.
Eceleni kwezitolo ze-Ayala Serin kanye ne-Finvest Fiora Mall. Ayikho i-Taal view
UMarishiel Ungumbungazi ovelele